धारा ७६ (५) लाई लिएर गोहीको आँशु चुहाउनेलाई कसैले पत्याउँदैन : अध्यक्ष प्रचण्ड « News24 : Premium News Channel
धारा ७६ (५) लाई लिएर गोहीको आँशु चुहाउनेलाई कसैले पत्याउँदैन : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । धारा ७६ (५) लाई लिएर गोहीको आँशु चुहाउनेलाई कसैले नपत्याउँने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत मागेपछि रोष्टममा बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत गरेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वाेच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त गरेको भन्दै पुनः स्मरण गराए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) लाई लिएर गोहीको आँशु चुहाएर कसैले पत्याउँछ तपाईलाई । बारम्बार लोकतन्त्र हत्या गर्ने ? ७६ (५) के हो ? पार्टीभन्दा माथि, जनताको सार्वभौम रक्षा गर्नका लागि दिइएको अधिकार हो । ७६ (५) लेख्दा हाम्रो सम्मत थियो ।’
यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले आजको यो दुर्दशा देखेको भए, गठबन्धन र पार्टी एकता नगर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘यस्तो दुर्दशा देखेको भए, गठबन्धन र पार्टी एकता गर्थे होला ? दुई दुई पटक संसद् विघन र सर्वाेच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना । यस्ता घटना त संसारमा विरलै घट्छन् ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्तीको भाषा संविधानको मर्मविपरीत भएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने । त्यस्तै, पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकमा केपीजीको मुखबाटै यसअघिका कुराहरु सुन्न चाहे पनि त्यो असम्भव भएको पनि उनले बताए ।
यसैगगरी भ्रष्टचार गर्न दिन्न, गर्दिने भन्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ढाकछोप गर्ने वाक्य मात्र भएको पनि उनले बताए ।
शान्ति सम्झौतापछि स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि बन्दापनि पटक पटक लोकतन्त्रमा प्रहार गरेको भन्दै विमति जनाए ।